विवाहित युवती, कफी र सेक्स — Imandarmedia.com
आज : २०७५ कार्तिक २७ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
विवाहित युवती, कफी र सेक्स
‘लौ बरवाद भयो’ मैले मनमनै भनेँ । उसले पुर्लुक्क हेरि, खिस्स हाँसी अनि मतिर हात बढाई । मैले पनि आफ्नो हात अघि बढाएँ । उसले समाई ।
‘सरी ल’ मेरो हात समाएर उठ्दै उसले भनि । मैले सरी भन्नै लागेको थिएँ । फेरि गल्ती पनि त उसको थिएन । ऊ किन सरी भन्दैछे ? आफैसँग प्रश्न गरेँ ।
‘हे डन्ट से सरी, आई एम हर्टली सरी फर दिस्’ मैले भने, ‘कतै चोट त लागेन नि ?’
‘डन्ट वरी, आई एम फाइन’ उसले भनी ‘एक्चुल्ली म गलत साइडमा थिएँ, यसमा तपाईंको कुनै गल्ती छैन ।’
मेरो बाइकले उसलाई हल्का ठक्कर दिएको थियो । उ निकै हतारमा भएकाले ठोक्किन पुगेकी थिई । तर, यसो भनेर म उम्किन मिल्दैनथ्यो । किनकि यहाँ म पनि केही केयरलेस पक्कै थिएँ । त्यस्तो बाटोमा ५० को स्पीड चलाउनु नपर्ने थियो ।
‘निकै हतारमा हो जस्तो छ नि?’ मैले प्रश्न गरेँ ।
‘हो नि ७ बजे बसमा सामान पुर्याइदिनुपर्ने, ६ः३० त यहीँ भइसक्यो’ उसले भनी ।
‘मे आई हेल्प यू ?’ ठेक्कर दिएको हिसाव चुक्ता गर्ने मौका गुमाउन चाहिन । उ बाइकमा बसी र भनी, ‘कलंकी ।’
बस पर्खिरहेको थियो । उसले सामान दिई । मैले बाइकमै लिएर आएँ ।
‘मसँग कफी पिउन मन छैन ?’ घर नजिकै छाडेर जानै लाग्दा उसले भनी ।
‘अक्कोर्स, बट इस्ट्स बाई यू वर अदर्स ?’ मैले भनेँ ।
‘आफै बनाएर खुवाउछु नि’ उसले भनी । त्यसपछि मेरो बाइक उसको दुई तले घरको आँगनसम्म पुग्यो । म सिढी चढ्दै उसको कोठासम्म । कोठाभित्र पुगेपछि अड लागेजस्तो फिल भयो । भित्तैभरी रहेका कृष्ण भगवानका तस्बिर हेरेर मन बहलाउने प्रयास गरेँ । उ मलाई एकछिन ल भनेर बाहिर निस्की । १० मिनेटसम्म आएकी होइन । कोही आएर सोध्यो भने के भन्ने होला भन्ने प्रश्न मनमा खेलिरह्यो । तर, ऊ आफै आइपुगी ।
लेखक- कृष्ण आचार्य
‘म कफी लिएर आइहालेँ ल’आउन नपाउँदै फेरि फुत्किहाली । मोरी कफी बनाउन गउकी होली भनेको त नुहाउन पो गएकी रहिछ । भिजेको फुक्का कपाल देखेर मलाई अनुमान लगाउन गाह्रो परेन । शरीरमा टपक्क टाँसिएका कपडा पनि त भिजेका थिए । भेट भएदेखि पहिलोपटक मैले उसलाई मज्जैसँग नियालेँ । हो, तलदेखि माथिसम्म ।
मलाई सबैभन्दा उसको ओठ मनपर्यो । निकै रसिलो थियो,रसबरी जस्तै ।
‘कफी फर यू’ म झसंग भएँ । उसका रसबरीजस्ता ओठको कल्पनामा कता हराएको रहेछु । धत्, यो मन पनि कति बेयमानी हुन सकेको, मनमनै भनेँ । हत्तपत्त उसको दिएको कफी समाएँ । लाग्यो पिउनुअघि उसको नाम त थाहा पाउनुपर्यो । सोधेँ, ‘नाम नभन्ने ?’
‘आकृति’ दाहिने हात मतिर बढाउँदै उसले भनी । ‘कृष्ण’ उसको हातमा हात मिलाउँदै मैले भनेँ ।
‘एक्लै ?’ कफीको पहिलो चुस्की सँगै मेरो प्रश्न चुहियो ।
‘सबैजना दार्जिलिङ घुम्न जानुभएको छ’ आकृतिको जवाफ आयो ।
‘तिमी नगएको?’ पहिलोपटक तिमीमार्mत उसलाई सम्बोधन गरेँ ।
‘मलाई आजभोलि घुम्न मन पर्दैन’ उसले सानो स्वरमा भनी । आजभोलि किन ? भनेर सोध्न मन थियो । तर, आवश्यक ठानिन ।
कफीको चुस्कीसँगै मेरो नजर उतिर थियो । केही क्षणको मौनतापछि उसले दुई औँला चुट्की पार्दै भनी, ‘के हेरेको ?’ मोरीले चाल पाइछे क्यारे । म अतालिएँ ।
‘कफी र तिमीलाई कम्पेयर गरेको’ के र किन भने म आफैलाई थाहा छैन ।
‘अनि के कस्ता समानता र भिन्नता पयौँ त ?’ आपतै पार्नेगरी प्रश्न गरी ।
‘मीठास कमन जस्तै छ तर, तिमी कफीको ठाउँमा नभएकाले यसै भन्न सक्दिनँ’ शब्दसँग खेल्न मलाई पनि मज्जैसँग आउथ्यो ।
‘भएँ भनेनि ?’ ऊ झन् कडा निक्ली । के भन्ने भन्ने भयो ।
‘मैले कम्पेयर गर्न सक्नेँ थिएँ’ जे मुखमा आयो त्यही भनिदिएँ । मेरो कुरा सुनेर ऊ हल्का लजाएजस्तो गरी । त्यसपछि मुस्कुराई । मलाई उसका नसालु आँखाले केही कुराको संकेत गरेजस्तो लाग्यो । म पछि हट्न चाहिन र भनिदिएँ, ‘सायद त्यसको अनुमति कुनै राजकुमारले मात्र पाउँछ होला ।’
‘तिमी पनि कुनै राजकुमारभन्दा कम छैनौँ’ उसले भनी ।
‘व रियल्ली’ मैले उसको हात चुम्दै भनेँ, ‘थ्यांक्स फर स्वीट कफी ।’
उसले मेरो गाला चुमिदिई र भनी, ‘कफीको लागि हात भने लिस्टका लागि…’
म अक्क न बक्क परेँ । एकछिनपछि उसको ओठ चुमिदिएँ । उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाइन । दुवै आँखा बन्द गरी । एबछिनपछि विस्तारै उसको कानमा भनेँ, ‘आई कान्ट कम्पेयर दिस विथ कफी । विकज इस्ट्स मोर स्वीट द्यान कफी ।’ ऊ फिस्स हाँसी ।
आकृतिले मलाई चपक्क कसेर आफ्नो अंगालोमा बेरेकी थिई । जहाँ मैले उसको सामिप्यता र निकटता महसुस गरेको थिएँ । चुम्बनबाट सुरु भएको हाम्रो निकटता धरै अघिसम्म पुग्यो । यो प्रेम थियो या आकर्षण मलाई थाहा छैन । प्रेम थियो भने भेटेको पहिलो दिनमै एक–अर्कालाई नबुझी कस्तो प्रेम ? आकर्षण थियो भने हामीमा एकअर्काप्रति कुनै उन्माद थिएन । सायद यो हाम्रो जवानीको भेल हुनुपर्छ । जुन अनियन्त्रित हुन्छ ।
मैले उसको हात हटाएर उठ्ने प्रयास गरेँ । उसका आँखाबाट आँसुको धारा बग्न थाले । ‘प्लिज’ नरोउ न’ मैले सम्झाउने प्रयास गरेँ ।
‘मैले आज सबैको विश्वास तोडेँ । मबाट ठूलो गल्तीभयो’ ऊ झन् जोडले रुन थाली ।
हो हामीले गल्ती नै गरेका थियौँ, किनकि हाम्रो समाज र संस्कृति पश्चिमा थिएन । हामीले गल्ती गरेका पनि थिएनौँ, किनकि हामीभित्र रहेको मीठास एकअर्कालाई साटेका थियौँ । उन्माद पोखिएको थियो ।
तरपनि, उसको आँसुले कताकता मलाई पोलिरहेको थियो ।
उसको फोन नम्बर लिएर म त्यहाँबाट निस्किएँ । उसले निन्याउरो मुख बनाएर मलाई हेरिरहेकी थिई । मैले विदाईको हात हल्लाएँ । त्यसपछि पछाडि फर्किएर फेरि हेरिन । किनकि आँसुको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने मलाई थाहा थियो ।
घरमा आएर पल्टिएँ । झलझली प्रकृतिकै ‘इनोसेन्ट’ प्रतिबिम्ब आँखअघि आइरह्यो । मोबाइल निकालेर फोन गरेँ । अनि उसलाई डिनरका लागि प्रस्ताव राखेँ । उसले सहजै स्वीकारी ।
हाम्रो भेट नयाँ बानेश्वरको इन्द्रेणी फास्ट फूडमा भयो । उसले मसँग आँखा जुधाउन सकिन । न मैले नै सकेँ । म उसलाई सप्राइज दिनेवाला थिएँ । यस्तो सप्राइज जसको उसले कल्पनासमेत गरेकी थिइन ।
‘आई लभ यू प्रकृति’ मैले गुलावको फूल दिँदै उसलाई प्रेम प्रस्ताव राखेँ । कुनै गल्तीलाई परिवर्तन गर्न त सकिदैन । तर, त्यसलाई सच्याउन भने पक्कै सकिन्छ । र, म त्यसका लागि अघि सरेँ ।
उसले फूल लिन हात अघि बढाइन । मेरो प्रयास जारी रह्यो ।
‘सरी कृष्ण, आइ एम म्यारीड’ उसको कुराले म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । एकछिन त विश्वास नै लागेन । र, भने, ‘ह्वाट ?’
‘यास’ उसले भनी ।
हातबाट गुलावको फूल भूइँमा खस्यो । बिहे गरेकी थिई भने त्यतिबेला मलाई किन रोकिन उसले, मेरो मनमा विभिन्न प्रश्नहरु खेल्न थाले । मलाई उदेखि घृणा जाग्न थाल्यो । मनसपटलमा सलबलाएका कुराहरु अतिरंजित भएर भुनभुनाउ थाले । र, म त्यहाँबाट जुरुक्क उठेँर हिँडे । उ केही बोलिन ।
मलाई उप्रति आपत्ति छ या मैप्रति थाहा छैन । दोष न उसको देख्छु न मेरो । तर, मनमा खेलेको प्रश्न एउटै छ, बिहे गरेकी थिई भने किन मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न तयार भई ? यही प्रश्नले मलाई पिरोलिरहेको थियो ।
उसले बारम्बार फोन गरिरहेकी थिई । म फोन रिसिभ गर्ने पक्षमा थिइन । ‘लास्ट टाइम आइ वान्ट टु टाल्क विथ यू’ उसले एसएमएस पठाइ । त्यसपछि भने मैले फोन रिसिभ गरेँ । त्यो पनि आफू केही नबोल्ने र उसको भनेको मात्र सुन्ने मनसायका साथ ।
उ बोल्न थाली, ‘हजुरले सबै कुरा नबुझी यस्तो व्यवहार नगर्नु पर्ने हो । मेरो साह्रै चित्त दुखेको छ । वास्तवमा म विवाहित भने पक्कै हुँ तर, मैले सुहागरात समेत मनाउन पाइन ।’ ऊ रोकिई । सुक्क सुक्क गर्न थाली ।
दवेको आवाजमा थप्दै गई, ‘बिहे गरेकै दिन जन्तीमलाई लिएर आउँदै गर्दा दुर्घटना भयो र उहाँको मृत्यु भयो । अहिले म माइतमा बस्दै आएकी छु । दुई वर्षसम्म मैले पीडालाई मनमै दबाएर राखेँ । तर, हजुरसँग एक्कासी भेट हुँदा के भयो आफैलाई थाहा छैन । सरी फर द्याट ।’
(कृष्ण आचार्यले समावेसी मासिकमा लेखेको कथा साभार)
२०७४ मंसीर १ गते प्रकाशित
मन्त्री पद खोसिएका सोडारी पार्टीबाटै निष्कासित, साधारण सदस्यता समेत् खारेज
मोरङमा घट्यो यस्तो घटना, प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या !
प्रिमियर लिग: म्यानचेस्टर सिटीद्वारा युनाइटेड ३–१ ले पराजित
श्रीमती हत्याको आरोपमा बुढानिलकण्ठबाट १ जना पक्राउ
काँग्रेसमा किचलो, देउवाविरुद्ध सुजाता निवासमा गोप्य बैठक, को-को भए सहभागी ?
लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नेपाल नियुक्त
बाख्रा चराउन गएकी १३ बर्षिया बालिका मृत फेला, बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका
नुवाकोटका ५ किशोरीलाई भारतमा बेच्न लैजान खोज्ने २ जना पक्राउ
बोक्सी आरोपमा महिलामाथि कुटपिट, वडासचिवसहित ३ जना पक्राउ
पुरूष वेश्याकाे पिडा: ‘प्रत्येक पटकको उफ्राईमा म्यामहरु शरीरभरी चिथोर्छन्’
जेलभित्र बस्न मन नलागेपछि यी कुख्यात आपराधि पुगे सर्वोच्च, गरे यस्तो काण्ड !
मन्त्रीबाट हटाइएका केशव स्थापितले यसरी खोले मुख्यमन्त्रीको पोल !
नेपालमा शिक्षक रहेका हिराबहादुर, जो अमेरिकामा पुगेर शक्तिशाली देशको संसद बने
रात्रिक्लब ‘बोर्डरल्याण्ड बार’मा गोली चल्यो, १२ जनाको मृत्यु
अपर तामाकोसीमा सर्वसाधारणले न्यूनतम ४० कित्ता सेयर पाउने
प्रहरी चेक पोस्टमा लडाकुहरुको हमला, भिडन्तमा परी सुरक्षाकर्मीसहित १५ को मृत्यु
अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्न हुँदैन: नेकपा नेता नेपाल
निर्मला हत्या प्रकरणबारे गृहमन्त्री थापा पुनः बोले, अपराधी छिट्टै पक्रिनेबारे दिए यस्तो बचन
केटीकाे विवादले मन्थलीमा ग्याङ्फाइट, ८ जनाकाे टाउकाे फुट्याे, सबैको अबस्था गम्भीर
दशैको दिन एकाविहानै बस दुर्घटना, ३ जनाको मृत्यु, २३ घाइते
मन्त्री केशव स्थापितको यौन प्रस्ताव नमान्दा मेरो जागिर खुस्कियोः पत्रकार रश्मिला
नारायणकाजीको राजीनामा बारे ओली-प्रचण्डले गए यस्तो निर्णय, सबै चकित
यी हुन आठ महिने शिशुको बलात्कारपछि हत्या गरेर भागेका अपराधि, कसरी परे पक्राउ ?
‘सुसाइड नोट’ लेखेर पूर्वएमालेका यी नेताले सप्तकोशीमा किन हाम फाले ?
हुम्लामा बाँदर भनेर गोली हान्दा मान्छे मरेपछि..